Guardiola oo kaga digay ciyaartoydiisa halista kaga imaan karta kooxda Man United, kulanka caawa ka dhici doona Old Trafford – Gool FM
Guardiola oo kaga digay ciyaartoydiisa halista kaga imaan karta kooxda Man United, kulanka caawa ka dhici doona Old Trafford
Dajiye April 24, 2019
(England) 24 Abriil 2019. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa kaga digay ciyaartoydiisa khatarta kaga imaan karta kulanka ay la ciyaari doonaan Manchester United, maadaama ay tahay koox dhaawacan.
Kooxaha Manchester United iyo Manchester City ayaa waxay caawa wada ciyaari doonaan kulankooda baaqiga u ahaa ee horyaalka Premier League, kaaso ka dhici doono garoonka Old Trafford.
Hadii ay Manchester City guul ka gaarto kulanka caawa dhigeeda Manchester United waxay si toos ah hogaanka horyaalka Premier League kala wareegi doonaan kooxda ay ku dagaalamayaan xili ciyaareedkan ee Liverpool.
United-ka ayaa guuldaro 4-0 ah kala kulantay kooxda Everton Axadii lasoo dhaafau, balse Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Manchester United ay ku soo bandhigi doonto qaab ciyaareed fiican garoonka Old Trafford.
Hadaba Guardiola ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday kahor kulanka caawa ee Manchester derby wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleenayaa in Manchester United ay qaab ciyaareed fiican nagu hor sameyn doonto, waan hubaa in sidaas ay dhici doonto”.
“Waa koox maskax badan, waxayna isku dayi doonaan inay soo bandhigaan wax walba ee awoodoodu gaarsiisan tahay, waxaan isku diyaari doonaa sida aan kaga hor tagi lahayd meelaha ay ka xoogan yihiin iyo sidoo kale meelaha ay ka liitaan”.
“Waxaa inooga harsan 4 kulan tartanka horyaalka Premier League, sidaas darteed waa inaan wada guuleysanaa dhamaan kulamada harsan, si aan u difaacano koobka horyaalka”.
“Old Trafford ma ahan meel sahlan in la aado, balse sidaasoo ay tahay waa meel aad u qurux badan, si wanaagsan ayaan u garaneynaa waxa nalaga doonayo inaan sameyno, waxaan halkaas u aadi doonaa si aan u soo ciyaarno kulan aad u fiican”.
Tababare Solskjær oo ku dooday inuu yahay shaqsiga ku haboon inuu hogaamiyo Manchester United marxalada soo socota
Real Madrid oo heleysa dhiiragalin xoogan si ay u sameyso saxiixa Luka Jovic